Docker ye Windows 10 inoda WSL2 uye inozochinja kune izvi munguva pfupi | Linux Vakapindwa muropa
WSL 2 inguva itsva yezvivakwa izvo Inotendera iyo Windows subsystem yeLinux kumhanyisa iyo Linux ELF64 mabhinari paWindows.
Iyi nyowani yekuvaka, iyo shandisa chaiyo Linux kernel (Linux 4.19), inogadziridza mashandiro anoita aya maBinux mabhainari neWindows uye komputa yako Hardware, uku uchipa imwecheteyo mushandisi ruzivo senge muWSL 1 (iyo iripo iripo yakagadzikana vhezheni).
WSL 2 inopa zvakanyanya kukurumidza faira system kuita uye yakazara system kufona rutsigiro, ichikubvumidza iwe kumhanyisa mamwe maficha senge Docker.
Iyi vhezheni itsva yeWSL 2 inoshandisa Hyper-V maficha kugadzira isingaremi chaiyo muchina ine shoma Linux kernel.
Tarisira zvirinani kuenderana neLinux software, kusanganisira Docker rutsigiro, uye "kuwedzera kunoshamisa kwefaira system performance."
1 Iyo chaiyo Linux kernel, iyo diki yekubata iyo Docker ane hanya nayo
2 Zvakanakira vagadziri
Iyo chaiyo Linux kernel, iyo diki yekubata iyo Docker ane hanya nayo
Iyo itsva vhezheni yeWindows subsystem yeLinux yaunza yechokwadi Linux kernel kuWindows.
Sekureva kwaSimon Ferquel, Senior Software Dhizaina kuDocker, kufambira mberi uku kwakakosha kwazvosezvo ichiunza pamwe neshanduko huru muhurongwa hwekambani yeDocker Desktop.
En chinyorwa pane iyo blog blog, Ferquel akazivisa kuti Docker inosiya Hyper-V kuona, iyo yauri kushandisa ikozvino yako Windows Docker application, kuenda kuWSL 2.
"Chimwe chezvinangwa zveDocker chagara chiri chekupa chakanakisa chigadziko mune hofisi nharaunda, neruzivo rwepedyo kune veko, ungave uri kushanda paWindows, Mac, kana Linux.
Kuti tiite izvi, tinoshandisa yakawanda nguva tichishanda pamwe Software Stacks inopiwa Microsoft uye Apple. Sechikamu chebasa iri, tanga tichinyatso tarisa Windows Subsystem (WSL) kubvira payakatanga muna 2016, kuti tione kuti tingabatsirika sei nezvigadzirwa zvedu. "
MuWSL 2 iyo Docker daemon inoshanda mushe pamwe nekuita kwakanakisa uye iyo nguva yainotora kutonhora bhutsu mudoko muWSL 2 ingangoita 2 masekondi pane edu ekuvandudza michina.
Isu tinofara kwazvo neiyi tekinoroji uye tinofara kuzivisa kuti tiri kushandira vhezheni nyowani yeDocker Desktop iyo inoshanda WSL 2, neruzhinji rwevanhu rwakatarisirwa muna Chikunguru. Izvi zvichaita kuti ruzivo rwekuvandudza Docker ruwedzere, kuvhura maficha matsva, uye sezvo WSL 2 inomhanya paWindows 10 Kumba Edhisheni, Docker Desktop ichaitawo.
Paunenge uchishandisa Docker iwo chaiwo muchina kuti unomhanya zvakakwana opaque: unogona kushamwaridzana neDocker uye Kubernetes APIs kubva paWindows, asi haugone kumhanya chero chinhu pamushini chaiwo. Kunze kweDocker kana Kubernetes midziyo.
Nekubatanidzwa kweWSL 2, iwe ucharamba uchiona kusangana kumwe chete yakakwana neWindows, asi zvirongwa zveLinux zvinomhanya paWSL zvichakwanisawo kuita zvakafanana.
Chii chichafadza vashanduri veDocker ndechekuti ivo vachakwanisa kusimudzira panguva imwe chete Windows neLinux mapurogiramu emidziyo.
Anogadzira anoshanda paDocker daemon achishandisa iyo Docker Desktop technical preview, WSL 2, uye VS Code iri kure inosanganiswa neDocker Desktop Linux nzvimbo dzekushandira dzinomhanya izere neLinux turu yekushandisa kugadzira zvigadzirwa.
WSL makomo achave neI / O mashandiro anenge akafanana neayo echinyakare Linux muchina.
Izvi zvichagadzirisa rimwe rematambudziko makuru neDocker Desktop ine inorema I / O maturakiti maturusi.NodeJS, PHP uye mamwe maturusi ewebhu ekuvandudza achabatsira kubva mukuvandudza uku.
Docker Desktop ichatora mukana weizvi kugadzirisa zvakanyanya mashandisiro ayo ezvekushandisa Ichashandisa zvishoma CPU sezvinobvira, pamwe nendangariro yainoda, uye ndangariro / CPU-yakasimba mabasa senge kugadzira mudziyo unomhanya nekukurumidza zvakanyanya kupfuura nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Docker ye Windows 10 inosarudza WSL2 uye ichachinjira kwairi munguva pfupi